कस्तो अचम्म! डिभोर्स गरेको १७ दिनपछि फेरि पति पत्नी! – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > कस्तो अचम्म! डिभोर्स गरेको १७ दिनपछि फेरि पति पत्नी!
कस्तो अचम्म! डिभोर्स गरेको १७ दिनपछि फेरि पति पत्नी!
admin July 11, 2019 July 11, 2019 Uncategorized	0
नेपालीमाझ एउटा उखान निकै प्रचलित छ- लोग्ने स्वास्नीको झगडा परालको आगो।र्घाखाँचीका एक जोडीले यो लोकोक्ती सत्य सावित गरेका छन्।उनीहरुले सम्बन्ध विच्छेद गरेको १७ दिनपछि जिल्ला अदालतमा गएर फेरि कोट म्यारिज गरेका खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा सन्धिखर्कबाट प्रेमनारायण आचार्यले लेखेका छन्। छत्रदेव गाउँपालिका १ का लीलामनी पौडेल र गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका १ की जमुना पौडेलले असार ५ गते जिल्ला अदालत अर्घाखाँचीबाटै सम्बन्ध विच्छेद गरेका थिए।
आफन्त र दुबैको सल्लाहअनुसार कुरा मिलेपछि सम्बन्धविच्छेद गरेका उनीहरुलाई अदालतमा पुनर्मिलन गराएको हो। पौडेल दम्पतीका ६ वर्षे छोरा छन्। दुबैका अभिभावकलगायत आफन्तले छोराको मुख हेरेर पनि अलग्गिनु नहुने भन्दै सम्झाएपछि उनीहरुको बिचार फेरिएको हो।बहकाउमा पारपाचुके गरेको र अहिले फेरि सँगै बाँच्ने सँगै मर्ने बाचा कसमसहित बिहे गरेको जमुनाले बताइन्।
यो पनिः धनकुटाको रुद्रवारी नजिक आज दिउँसो यात्रुवाहक वस र मोटर साईकल एकापसमा ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा एक जना घाईते भएकाछन् । घाईते हुनेमा मोटर साईकलमा सवार धनकुटाको ताङ्खुवा ९ का अन्दाजी ३३ वर्ष का तेञ्जी शेर्पा रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यलय धनकुटाले जनाएको छ । धनकुटावाट धरान तर्फ गईरहेको मे ७ प ३७९४ नं को मोटर साईकल र विपरित दिशावाट आईरहेको को १ ख ५१४१ नं को वस रुद्रवारी नजिक काेशी लाेकमार्गमा एकापसमा ठोक्किएर दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
घाईते शेर्पालाई धनकुटा अस्पतालमा सामान्य उपचार पछि थप उपचारका लागि विपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान रिफर गरिएको ट्राफिक प्रहरी प्रमुख सुरेन्द्र खड्काले जानकारी दिनुभयो । घाईतेको टाउको र दाहीने हातमा वढी चोट लागेको जनाईएको छ । दुर्घटना ग्रस्त वस, वसका चालक सुनसरी धरान १६ का वर्ष ४१ का दिपक राई र मोटरसाईकल नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यलय धनकुटामा वुझाईएको प्रमुख खड्काले वताउनुभयो । आज दिउँसो पानी परिरहेको वेला व्रेकमा समस्या भएर दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको भनाई छ ।
दुर्घटनाको कारण मोटरसाईकलमा वढी क्षती पुगेको ट्राफिक प्रहरी दिपक खड्काले वताउनुभयाे । प्रहरीका अनुसार घाईतेको ठेगाना लाईसेन्समा उल्लेख भएअनुसारको हो ।
छवि र श्रीमति शिल्पा पोख्रेलकाे बारे खुल्यो यस्तो रहस्य!
प्रदेश सभा सदस्य कृष्णा केसी चढेको गाडी तोडफोड
पास्नीकाे भोज खाएका ४१ जना गाउँलेहरू यस्तो बिरामी परेपछि…
आखिर किन रोए देशै टुक्र्याउन खोज्ने सिके राउत कार्यक्रममा माइक समाएर बोल्दा बोल्दै? – भिडियो सहित